Ny fandikana voalohany ny Apple Glasses amin'ny ho avy dia mampatsiahy antsika Atoa Magoo | Avy amin'ny mac aho
Efa herintaona mahery izahay no niresaka momba ny mety ho fisidihan'i Apple ao amin'ny tsena solomaso virtoaly, solomaso izay, tsy toy ny nomen'ny Google sy Intel taty aoriana antsika, afaka ho tonga ny fikafika tadiavin'ny mpampiasa hampifaly an'ity sehatra ity. Efa nanao izany tamin'ny Apple Watch ianao.
Ireo mpandoa vola momba ny mety ho masomasin'ny zava-misy i Apple dia tsy namoahanay, raha tsy hoe miavaka amin'ny maha-izy azy izy io. Ireo tovolahy ao amin'ny iDropNews, izay misy an'i Matin Hajek fanta-daza, dia nanome fahalalahana an-tsaina ary mampiseho amintsika ny fandikan-teny vitsivitsy, antenaiko fa aza mitovy amin'ny endrika izay iasan'ny Apple, satria mampahatsiahy antsika betsaka ny solomaso Andriamatoa Magoo izahay.
Araka ny hitantsika amin'ny sary etsy ambony, ny solomaso ihany dia hampiseho ny fampahalalana mivantana amin'ny kristaly Raha tokony hampiasa laser amin'ny retina izy io, toy ny solomaso Intel, fa ho fanampin'izany, asehon'izy ireo amintsika ny mpanampy Siri, miaraka amin'ireo peratra hetsika, ny daty sy ny fotoana, zavatra tsy misy dikany, izany dia jereo ny itodihanao. Amin'ity tranga ity dia nomen'i Martin Hajek sary an-tsaina be loatra izany ary namorona fandikan-teny izay tsy dia misy itovizany amin'ny zavatra mety hatombok'i Apple.
Araka ny fandikana azy, ny endrik'ireo solomaso dia metaly, miaraka amina endrika izay mampatsiahy antsika ny solomaso ski, tsy noho ny habeny fotsiny, fa satria ny vera dia sombin-javatra iray manontolo, satria tsy mahita zana-kazo eo anelanelan'ny solomaso roa isika. Mikasika ny famandrihana, ny solomaso virtoaly Google namboarina izay noforonin'i Martin dia tsy misy tariby ary hapetraka miaraka amin'ireo lantira, zavatra iray hafa izay tsy misy dikany, satria amin'ny farany dia hiafara amin'ny fikororohana izy ireo.
Eritreritra amin'ny fahefana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Ny fandikana voalohany ny Apple Glasses amin'ny ho avy dia mampatsiahy antsika Atoa Magoo